Nke ahụ ọ bụ eziokwu na e nwere HTTPS na SEO mmetụta na ọkwa gị?
Ka anyị were ya - n'oge a, ịdabere na HTTPS na SEO na-emetụta ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla na ndepụta nke nsonaazụ ọchụchọ search engine, na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ bụghị nkwụsị. Enwere ezigbo ihe mere ị ga-eji gbanwee ebe nrụọrụ weebụ site na Http gaa na HTTPS, na-atụle ihe omume zuru ụwa ọnụ ugbu a maka ahụmịhe kachasị mma ma dị nchebe. Site n'echiche nke na-arụ ọrụ azụmahịa, dịka ọmụmaatụ, ụlọ ahịa weebụ n'ịntanetị, HTTPS na SEO mmetụta ga-aghọ nke doro anya. Anyị ga - eche ya ihu - ọ kacha mma ka ịme ihe. Ihe omimi nke ugbua nke Web a choro ka anyi mee ihe kachasi anyi nma iji mee ihe obula n'ile anya n'ile anya n'ihu mgbanwe ndia.
Ọzọkwa, Google n'onwe ya ekwuputala na mbụ ya, karịsịa na ọkwa nchedo dị mma. Ma eleghị anya, ị chọpụtala na ọrụ nile nke ndị nnweta ọchụchọ na-akwado ugbu a na-enye gị njikọ ejiri aka (dị ka Google Search onwe ya, Gmail, Google Drive, wdg.). Ọfọn, anyị na-ahụ na otu ndị ọrụ Google na-arụ ugbu a na-edebe ebe nchekwa nchekwa Ịntanetị, na-emefu azụmahịa azụmahịa, ọbụna siri ike karịa mgbe ọ bụla ọzọ!
Ka ị ghara ịkọwa na egwuregwu ndị kachasị n'ahịa n'Ịntanet na-eme ihe kachasị mma iji nye naanị ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ A-1. N'ezie, usoro nchebe nke dị na mbụ site na usoro nzuzo ezoro ezo HTTPS aghọworịrị ọnọdụ ọkọlọtọ nke na-agba ọsọ ahịa ha.M na-ekwu na ndị ahịa kachasị enwere ike ịntanetị na-atụ anya na ha ga-eji naanị ibe weebụ wepụta nchedo dị mma na HTTPS. Anyị na-atụ anya ka onye ọrụ dị otú ahụ dị nchebe na ndabara, naanị ịwụpụ ihe ndị ahụ na-aga n'ihu na-enweta site na-enweghị SSL asambodo.
Ma na-ala azụ banyere HTTPS na SEO mmetụta na mgbasa ozi weebụsaịtị gị n'ịzụ ahịa na ndepụta Google nke SERPs? Ị nwere ike ịchọpụta azịza niile dị na Google na ibe weebụ, nke kachasị maka ndị ahụ ka na-amaghị ihe banyere ịme mkpebi ikpeazụ iji nyefee na HTTP ka HTTPS. Kama ime ka i kwenye na ụfọdụ uru dị na ntanetị, nke sitere na njikọta HTTPS SEO, m ga-enwe nkowa mkpirikpi nke usoro nke ịgbanwee site na HTTP gaa na HTTPS maka ebe nrụọrụ weebụ gị.
Mgbe a na - edozi ya n'ụzọ ziri ezi (ọbụghị site n'aka onwe gị), ịchọta ibe weebụ gị gaa na HTTPS nwere ike ịghọ usoro kwụ ọtọ na nke dị mfe:
Mee ka ị nweta akwụkwọ SSL gị
Gafere usoro nhazi maka akwụkwọ na-eji akaụntụ Bochum nke ebe nrụọrụ weebụ gị
Ọ dị mkpa ka ịlele ọnụọgụ abụọ na njikọ gị niile, dịka mgbe ọ bụla i mere njem gị, URL ọ bụla n'enweghị nkwalite zuru ezu gaa na HTTPS ga-efu ruo mgbe ebighi ebi
E kwuwerị, echefula ịkọwapụta engines ọchụchọ nke nnyefe weebụsaịtị gị.Nanị nweta redirects 301 ka ọ bụrụ HTTPS, ka onye ọ bụla nwere ikike ịdebanye aha gị na ibe weebụ ọ bụla ga-eduzi gị na ndị ọhụrụ gị. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla na Google's Search Console, ana m akwado ịmepụta aha abụọ dị iche iche iji kewaa ụzọ HTTP na HTTPS iji gbochie nsogbu dị otú ahụ otu ugboro Source .